Dahalo miisa 74, vehivavy ny roa, mitondra basim-borona sy fitaovam-piadiana hafa no nandroba ny tananan’i Morarano Beraketa, izay mitoka-monina manakaiky an’Andriry, ny 26 febroary lasa teo, tokony ho tamin’ny 10 ora alina. Nanao ny fanarahan-dia nianavaratra avy hatrany ireo fokonolona sy ireo Jama tany an-toerana. Nisy ny fifandonana teo amin’ny toerana antsoina hoe Amborokafo, fokontany Ambararata, kaominina ambanivohitra Isoanala. Ny 27 febroary tokony ho tamin’ny 9 ora maraina kosa vao nisy nampandre ny zandary teo an-toerana ka zandary dimy no nanampy ireo mpanara-dia. Lasan’ireo dahalo ny omby miisa 37 sy ondry miisa 96. Fokonolona miisa telo sy Jama miisa telo no matin’ireo jiolahy. Mitohy ny fanarahan-dia, nangataka fanampiana haingana avy amin’ny zandary avy any Anosy hanampy azy ireo amin’ny fanarahan-dia.
Ramatoabe antsoina hoe Razarasoa, 102 taona no maty am-pitoerana tao anaty fiara KOFIFI laharana ho any Toliara, ny 25 febroary lasa teo, tokony ho tamin’ny 11 ora alina, tany Beronono Ilaka Centre. Rehefa natao ny fizahan’ny dokotera, fantatra fa tazo mahery no nahafaty azy. Nalefa ao amin’ny hopitaly Ambositra ny razana, ary efa nampandrenesina ny fianakaviany.
Ny alarobia 24 febroary 2016, teny Itaosy tamin’ny 6 ora havira, voasambotry ny polisy miady amin’ny heloka be vava, sakelika faha telo etsy Anosy, ny tovolahy iray antsoina hoe Tsivoasana Anslème, 33 taona, gadra nitsoaka ny fonja tany Manakara. Araka ny « avis de recherche » naparitaka, nitsoaka ny fonja ity tovolahy, ity ny 23 may 2013, raha tokony ho jolay 2014 izy vao tokony nivoaka. Halatra madinika no nahavoatazona azy tamin’izany. Vaovao avy amin’ny olona tsara sitra-po no nahafatarana ny fisiany teny Itaosy ka izao noraisim-potsiny izao.